Ibhasi Ekupholiseni Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Ibhasi Ekupholiseni Ifektri
Uchungechunge lwe-SZR luhlobo lwophahla oluhlukanisiwe oluphezulu lwe-air conditioner ye-8.5m kuya ku-12.9m kusuka phakathi kuya phezulu kuya ekugcineni kwebhasi elijwayelekile, umqeqeshi, ibhasi lesikole noma ibhasi elihlanganisiwe. Amandla okupholisa we-air conditioner yochungechunge lwamabhasi asukela ku-20kW kuye ku-40kW, (62840 kuya ku-136480 Btu / h noma ngo-17200 kuya ku-34400 Kcal / h). Ngokuqondene ne-air conditioner yetekisi noma ibhasi engaphansi kuka-8.5m, sicela ubheke uchungechunge lwe-SZG.
Uchungechunge lwe-SZQ luhlobo lwophahla oluhlukanisiwe oluphezulu lwe-air conditioner ye-8.5m kuya ku-12.9m kusuka emnothweni ojwayelekile webhasi, umqeqeshi, ibhasi lesikole noma ibhasi elicacisiwe. Uchungechunge olunohlobo lokushisa okuphezulu luyatholakala. Amandla okupholisa we-air conditioner yochungechunge lwamabhasi asukela ku-20kW kuye ku-40kW, (62840 kuya ku-136480 Btu / h noma ngo-17200 kuya ku-34400 Kcal / h). Ngokuqondene ne-air conditioner yetekisi noma ibhasi engaphansi kuka-8.5m, sicela ubheke uchungechunge lwe-SZG.
SZG uchungechunge uhlobo ophahleni ukukhwezwa air conditioner. Kusebenza kubhasi lomuzi eliyi-6-8.4m kanye nebhasi lezivakashi elingu-5-8.9m. Ukuze ube nobubanzi obubanzi kakhulu bokusetshenziswa kwamamodeli ebhasi, kunezinhlobo ezimbili zobubanzi beSZG chungechunge, ngo-1826mm no-1640 ngokulandelana.
I-SONGZ yokuhlanzwa komoya kanye nesistimu yokubulala amagciwane uhlobo lwedivayisi yokugcina yokubulala amagciwane, esebenza nge-antivirus, sterilizer, VOC filter kanye ne-PM2.5 filter.
Isabela obizweni lwezwe kusuka ngonyaka wezi-2014 kuze kube manje, iChina iphinde yaqhuba ezinye izinto ezintsha ku-air-conditioner ebuyiselwe emuva okokuqala, yafaka ubuchwepheshe bomoya opholisa umoya kagesi ngokunabileyo kwisiphephetha-moya sethu esibuyele emuva, futhi ithuthukise izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo ukuhlangabezana nezidingo zemakethe.